keyboard [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/dea6ab37152d3f27072dc8780c461011.xhtml failed
Ny clavier dia ny fitaovana misolo ny milina fanoratana amin’ny solosaina, ilay takelaka irariana bokotra voasoratra maromaro io. Misy karazany maro no efa nifandimby hatramin’izay, arakaraka ny fandehan’ny fotoana sy ny orinasa manamboatra azy. IBM, Apple, Sun, Microsoft, sns ohatra no niavian’ireo karazany tena fampiasa. Karazany telo no singanina:
- clavier standard: standard taloha no nahatonga io anarana io, ohatrohatra ny clavier fahita ihany saingy tsy misy an’ilay pave numerique iny.
- clavier etendu: ireny fampiasantsika andavanandro ireny
- clavier an’ny solosaina finday: manakaiky kokoa ilay voalohany, saingy misy fanatsarana vitsivitsy.
Misy arakaraka ny tenim-pirenena ny filaharan’ny touches eo amboniny, ary ho an’ireo firenena tatsinanana aza dia misy tarehin-tsoratra manokana ho azy (sinoa, arabo, japoney, rosiana, sns). Ny malagasy moa matetika mampiasa ny klavie frantsay, ka toy izao ny touches eo amboniny
Ho an’ny milina PC dia misy port PS/2 (volomparasy) natokana hametrahana klavie. Ho an’ny milina mac indray dia misy mitovitovy amin’io atao hoe ADB. Taty aoriana dia nipoitra ny klavie USB izay afaka mipetraka amin’ny port USB izay misy.
Ireo Touches amin'ny clavier, totozy, Hardware
keyboard.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43